Xiaomi Mi 10 Pro တွင် 16GB RAM ထည့်သွင်းလာမည် | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Xiaomi Mi 10 Pro တွင် 16GB RAM ထည့်သွင်းလာမည်
Xiaomi Mi 10 Pro တွင် 16GB RAM ထည့်သွင်းလာမည်
Xiaomi အနေနဲ့ Mi 10 စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူ Mi 10 Pro စမတ်ဖုန်းကိုပါ ကြေငြာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “Pro” သို့ “Plus” ပါတဲ့ ဖုန်းတွေလိုမျိုး Mi 10 Pro မှာလည်း ပုံမှန်ဗားရှင်းဖုန်းထက် ပိုကောင်းတဲ့ အချက်အလက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထည့်သွင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်လမှာ ဖုန်းတွေကို မိတ်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ “About Phone” ဆိုတဲ့ screenshot တခု လူထူကြားထဲကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။
အဲ့ပုံရိပ်ကို မျှဝေလိုက်သူကတော့ Xiaomishka (@xiaomishka) ဆိုတဲ့ တွစ်တာအကောင့်ဖြစ်ပြီး ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ Mi 10 Pro ဖုန်းမှာ 6.4-inch display ဖြစ်ပြီး Snapdragon 865 ပရိုဆက်ဆာသုံးလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော ဒီဖုန်းအတွက် 16GB RAM နဲ့ 512GB storage တွဲဘက်ပေးထားတာပါ။ Xiaomi ရဲ့ဖုန်းဟာ 16GB RAM နဲ့ထွက်လာမယ့် ပထမဆုံးဖုန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။. Galaxy S20 Ultra 5G မှာလည်း 16GB RAM သုံးလာမှာပါ။
Mi 10 Pro ရဲ့နောက်ဘက်မှာ ကင်မရာ ၄ လုံးတပ်ဆင်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး အဓိကကင်မရာဟာ 108MP ဆင်ဆာဖြစ်ပြီး၊ အခြားကင်မရာ ၃ လုံးကတော့ 16MP, 12MP နဲ့ 5MP တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကင်မရာ အကြောင်းတော့ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါဘူး။. ဘက်ထရီကိုတော့ 5250mAh စွမ်းအားကြီးတာမျိုးကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီဖုန်းမှာ လျှင်မြန်တဲ့ကားသွင်းစနစ်ကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးမှာပါ။
Xiaomi Mi 10 Pro တြင္ 16GB RAM ထည့္သြင္းလာမည္
Xiaomi အေနနဲ႔ Mi 10 စမတ္ဖုန္းနဲ႔အတူ Mi 10 Pro စမတ္ဖုန္းကိုပါ ေၾကျငာလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “Pro” သို႔ “Plus” ပါတဲ့ ဖုန္းေတြလိုမ်ိဳး Mi 10 Pro မွာလည္း ပုံမွန္ဗားရွင္းဖုန္းထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္လမွာ ဖုန္းေတြကို မိတ္ဆက္ေတာ့မွာျဖစ္ၿပီး ဖုန္းနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ “About Phone” ဆိုတဲ့ screenshot တခု လူထူၾကားထဲကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။
အဲ့ပုံရိပ္ကို မွ်ေဝလိုက္သူကေတာ့ Xiaomishka (@xiaomishka) ဆိုတဲ့ တြစ္တာအေကာင့္ျဖစ္ၿပီး ပုံမွာ ျပထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ Mi 10 Pro ဖုန္းမွာ 6.4-inch display ျဖစ္ၿပီး Snapdragon 865 ပ႐ိုဆက္ဆာသုံးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ ဒီဖုန္းအတြက္ 16GB RAM နဲ႔ 512GB storage တြဲဘက္ေပးထားတာပါ။ Xiaomi ရဲ႕ဖုန္းဟာ 16GB RAM နဲ႔ထြက္လာမယ့္ ပထမဆုံးဖုန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။. Galaxy S20 Ultra 5G မွာလည္း 16GB RAM သုံးလာမွာပါ။
Mi 10 Pro ရဲ႕ေနာက္ဘက္မွာ ကင္မရာ ၄ လုံးတပ္ဆင္ထားမွာ ျဖစ္ၿပီး အဓိကကင္မရာဟာ 108MP ဆင္ဆာျဖစ္ၿပီး၊ အျခားကင္မရာ ၃ လုံးကေတာ့ 16MP, 12MP နဲ႔ 5MP တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ဘက္ကင္မရာ အေၾကာင္းေတာ့ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။. ဘက္ထရီကိုေတာ့ 5250mAh စြမ္းအားႀကီးတာမ်ိဳးကို ထည့္ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီဖုန္းမွာ လွ်င္ျမန္တဲ့ကားသြင္းစနစ္ကိုလည္း အေထာက္အပံ့ေပးမွာပါ။
Previous articleP30 ထက်ဈေးသက်သာမယ့် Huawei P40 ဖုန်း
Next articleRealme C3 စမတ်ဖုန်းကို လာမယ့်လ ၆ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်လာမည်